Ikuku ikuku na ihe kpatara uru ga-eji dabere na ya | Martech Zone
Ikuku na ihu igwe na ihe kpatara uru ga-eji dabere
Wenezde, August 5, 2015 Wenezde, August 5, 2015 Douglas Karr
Site na saịtị na ngwaọrụ niile anyị nwere site na weebụ, gịnị kpatara na anyị niile anaghị ahụ ọnụahịa dị ala karịa ngwaahịa ọ bụla? Enwere ọtụtụ ndị na-eri ma ọ bụ azụmaahịa na-eme nke ahụ, mana imirikiti mmadụ anaghị eme ya. Anọla m n'ịntanetị na afọ ole na ole gara aga na m gbanwere site n'ịkwọ ụgbọala Ford na Cadillac. Ndị na-ere ahịa na Ford kpasuru m iwe mgbe ha boro m obere ego iji dozie okwu ncheta.
M kwụrụ ụgwọ ahụ, mgbe ahụ, m gara ụgbọala Cadillac ọtụtụ izu ole na ole mgbe e mesịrị. M merụrụ ahụ ịhapụ SRX ọhụrụ n'abalị ahụ. Onye na-ere ahịa ahụ waba n'okpukpu ala iji nweta m ụgbọ ala m chọrọ na ego m nwere ike imeli. Mgbe m bịaghachiri ka m tinye ụrọ apịtị na ebe a na-anya igwe kwụ otu ebe, ha wụnyeghị ya n’anaghị ego. Mgbe ọ bụ ụbọchị ọmụmụ m, ha na-akpọ m ma sị m Obi mebọchị ọmụmụ. Mgbe m batara maka mgbanwe mmanụ, ha nyere m ọfịs Wi-fi, ma ọ bụ elu nke ndị mgbazinye ego na-akwụghị ụgwọ. (Ee, ama m na ha chọrọ ka m zụta ya).
Eziokwu bụ, M na-amasị SRX… ma m hụrụ n'anya ika. Ahụmịhe nke onye na-ere ahịa m na-enye, ndị na-ere ahịa na-enye, na akara ahụ na-enye, na -emepụta ahụmịhe gafere ọnụ ụzọ 4 nke ụgbọ ala ahụ. M na-eche pụrụ iche… na m dị njikere ịkwụ ụma maka na.
Na ụwa ije, ha na-akpọ ahụmahụ nke ohere gburugburu gị Ikuku, nke e dere na-elekwasị anya na ndị na-edepụta ụkpụrụ ụlọ na ahụmịhe ụlọ ahịa ha na-emepụta.
Nkọwa nke ikuku
Na 1973, Philip Kotler dere otu isiokwu na Akwụkwọ akụkọ Retailing ebe ọ kọwara mmetụta nke ụlọ ahịa mkpọsa na omume nzụta. O nyere nkọwa a:
Mgbalị iji mepụta gburugburu ebe obibi iji mepụta mmetụta mmetụta uche kpọmkwem na onye zụrụ ya nke na-eme ka ịzụta ihe gbasara nke puru omume. Na-emetụta ihe gbasara nke puru omume bụ ihe mmetụta uche nke ohere gbara gburugburu ihe ịzụta, nghọta nke onye zụrụ ahịa banyere ikike ndị ahụ, mmetụta nke ikike sensory a ghọtara na mmetụta nke ọnọdụ onye na-azụ ihe.
Mgbe afọ 20 nke ịrụ ọrụ na PC, ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ maka zụrụ a MacBook Pro. Igbe ahụ mara mma. O nwere aka, ezubere ya na nke mgbasa ozi ha, ma mgbe ị meghere ya, laptọọpụ na-acha nro. Ọ bụ ahụmịhe dọpụtara ya na igbe ma tinye ya na tebụl. Ọ bụghị ụdị styrofoam ọgbaghara na akpa plastik na-agaghị ekwe omume imeghe.
Ihe Apple na-eme bụ imepụta ma mepụta ahụmịhe pụrụ iche, na-agbanwe agbanwe maka atụmanya ya na ndị ahịa ya. Site na ụlọ ahịa, na nkwakọ ngwaahịa, na ngwaahịa, na sistemụ arụmọrụ, site na ngwanrọ. Enwere ihe ikuku gburugburu Apple nke na-eme ka ọ pụọ iche. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya, ahụmịhe ahụ bara nnukwu uru.
Ikuku ihu igwe gụnyere ngosipụta nke ngwaahịa, agba ya, isi ya, ụda ya, ndị na-ege ya ntị, nkwalite ya na ahụmịhe ịzụ ahịa. Dị ka Maazị Kotler dere, sị:
Otu n'ime ọganihu kachasị dị ugbu a na echiche azụmahịa bụ mmata nke ndị mmadụ, n'ime mkpebi izuzụrụ ha, na-azaghachi ihe karịrị naanị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a na-enye. Ngwaahịa a na - ahụ anya - akpụkpọ ụkwụ, friji, ịkpụ ntutu, ma ọ bụ nri - bụ naanị obere akụkụ nke ngwugwu oriri niile. Ndị na-azụ ahịa na-azaghachi ngwaahịa niile. Ọ gụnyere ọrụ, akwụkwọ ikike, nkwakọ ngwaahịa, mgbasa ozi, ịkwụ ụgwọ, ihe na-enye obi ụtọ, onyonyo, yana atụmatụ ndị ọzọ so ngwaahịa a.
Afọ iri ise gara aga na ndị quote ka na-eguzo. N'ihe atụ mbụ m, ahụmịhe ịzụ ahịa mebiri emebi site na ahịa - ikuku emetọla. Na ihe atụ Apple, ọ dị elu mgbe niile. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịzụta iPad na Best Buy, ejiri nlezianya dozie ya iche na ndị na-asọmpi.
Ahịa gị n'ịntanetị, ahụmịhe ahịa, onboarding, ikpo okwu, njikwa akaụntụ na ịgba ụgwọ bụcha akụkụ nke ikuku na-emetụta ikike ụlọ ọrụ gị inweta, jigide ma mepụta mmekọrịta bara uru karị na atụmanya gị na ndị ahịa gị. N'ezie, ka oge na-aga, ekwere m na ha nwere mmetụta dị ogologo oge na ike ịsọ mpi. Ka ụlọ ọrụ na-aga n'ịntanetị, ọ na-adị oke mkpa na ahụmịhe na usoro ntanetị na ntanetị na-akwado mkpebi ịzụta.
Abụ m ezigbo mmadụ ma a bịa n'ihe ngwaọrụ, ngwaahịa na ọrụ anyị na-azụ ahịa. Otú ọ dị, m ga-eme ihe n'eziokwu na m na-achọpụta ngwa ngwa ịzụta mkpebi mgbe m masịrị m. Mgbe ụfọdụ ọ bụ vidiyo ha biputere, oge ụfọdụ ederede, mgbe ụfọdụ ahụmịhe saịtị ahụ, na mgbe ụfọdụ ịre aha. Ọ bụrụ na ọ gbanwere - saịtị, mmekọrịta, email, vidiyo, wdg - ị nwedịrị ike ịhụ m ka m na-abanye data kaadị kredit m maka ịntanetị zụta ozugbo ahụ. Ọ bụrụgodi na ọ na-efu ego karịa.
Nke bụ eziokwu bụ na onye ọ bụla nwere ike ịsọ mpi maka ọnụ ala. Mana mgbe ị na-achọ ịbawanye uru ma mee ngwangwa ahịa gị, ọ dabere na ịdị irè nke gị ikuku ahịa.
Tags: apụlikuku ahịaikukuzụrụ kacha mmaebe ozu ahiacadillacikeakwụkwọ mkpọsaphilip kotlerretail
Olee otu enweghi nzaghachi nke ndi mmadu na-emebi ahia gi
Free Demographic Akụkọ? Daalụ Facebook!